Ny gazetibokin'ny vehivavy dia milaza amintsika fa ny olon-drehetra dia te-hijery mpiara-miasa iray izay vonona foana hanao firaisana. Angamba izany dia izany, saingy firy ny lehilahy manao ny vaovao momba ny fandrenesana ny zazavavy kely? Azo inoana fa tsy afaka ny ho afa-po ny vehivavy bevohoka iray, ary tsy hisy olona hahatsapa ny tsy fahombiazany. Ary ny manam-pahaizana amin'ny ankapobeny dia hilaza fa ny nemofomania dia aretina mitaky fitsaboana. Andeha hojerentsika ny anton'izany.
Ny fanazavana tsara indrindra ny antony mahatonga ny ny nenim-bony dia heverina ho aretina dia hanome ny soritr'aretiny:
Ny toetra mampiavaka ny firaisana ara-nofo. Ny fiantsoana dia afaka hiresaka momba ny lohahevitra mahatsikaiky, ny fisian'ny lehilahy sy zavatra tsy mifandray amin'ny sehatra anatiny.
Tsy fahafahana hahazo fahafaham-po. Ny orgasme dia mitebiteby, saingy tsy tonga ny fihetseham-po.
Ny fanafihana dia mety ho tsy voafehy, ka matetika ny marary dia manana trangam-pandaminana. Indraindray ny toe-javatra toy izany dia ampitahaina amin'ny fidiran'ny mpidoroka zava-mahadomelina, raha ny marina anefa dia ity ny doka avy amin'ny zava-mahadomelina sy ny firaisana ara-nofo dia ilaina mba hanamaivana ny fihenjanana.
Ireo famantarana etsy ambony misy ny nmphomania dia mitovy amin'ny vehivavy sy ny lehilahy. Eny, tsy tokony ho gaga isika, ny solontenan'ny firaisana ara-nofo ihany koa dia mijaly amin'ity aretina ity. Nymphomania lahy dia antsoina hoe satyriasis, izay endri-pahaizana be loatra. Tsy azo lazaina fa ny olona dia mijaly noho izany aretina izany matetika, angamba, tsy ny rehetra no sahy manatona manam-pahaizana manokana ho fanampiana. Ary mila manao izany ianao ary tsy hoe satria ny libido avo lenta avoakany dia tsy mamela anao hiaina araka ny mahazatra. Mbola eo amin'ny antony mahatonga ny aretina izany, saika matetika dia fatiantoka goavana amin'ny asan'ny vatany, ka miteraka vokatra be dia be.
Ny antony mahatonga ny nmphomania amin'ny lehilahy sy ny vehivavy
Fihetseham-po amin'ny asan'ny hypothalamus. Amin'ny tranga maro, dia ataon'ny meningitis na encephalitis izany.
Ny atidoha amin'ny glandy.
Manimba ny atidoha na ny fahasimban'ny atidoha.
Ny aretina ara-tsaina (schizophrenia, psykosezy manapotipotika, psypophy, hysteria).
Toe-javatra tsy misy dikany.
Amin'ny toe-javatra tsy fahita firy, ny fitrandrahana tsy ara-dalàna dia natiora voajanahary, tsy misy ifandraisany amin'ny fanakorontanana ao amin'ny sainy ara-tsaina sy ara-batana.
Ahoana no fomba fitsaboana nymphomania?
Koa satria nanapa-kevitra izahay fa aretina ny nymphomania, dia tokony hilaza ny fomba hanafoanana azy io, ny dokotera dia tsy tokony hizaka fanafody. Satria tsy ho vitanao mihitsy ny mamaritra ny antony mahatonga izany fahadisoana izany - na rafitra na olana lehibe ara-batana. Noho izany, mbola mila mampihatra amin'ny manam-pahaizana manokana ianao. Ankoatra ny fitsidihan'ny dokotera sy ny hoe matetika no mampifangaro ny nmphomania (toe-javatra maharary) miaraka amin'ny libido (fiasa ara-batana), ary ny manam-pahaizana dia afaka mamaritra izay zava-mitranga aminao.
Raha toa ka miaina ny tsy fahasalamana noho ny fitomboan'ny firaisana ara-nofo (raha tsy ny nymphomania) dia azonao atao ny manandrana manelingelina ny tenanao amin'ireto fomba manaraka ireto.
kilasy ao amin'ny gym, tsy misy fiofanana manokana miaraka amin'ny mpampianatra lahy;
misimisy kokoa ny asa. Ny "Ratsy Ratsy" dia matetika no tonga amin'ny eritreritra hoe "tsy manao na inona na inona";
manararaotra ny fomba fitsaboana nentim-paharazana - hanjary handoavam-bolo ny fihinanana herim-po mahasalama;
Ampiheno ny fihinanana vokatra vokatra aphrodisiac: dabam-boankazo, tsaramaso, selera, sôkôla, seafood, sns.
Raha toa ka tsy manome ny vokany iriana ireo "manilikilika mampikorontana" ireo dia mandehana toro-hevitra amin'ny toeram-pitsaboana iray.
Ahoana ny fampiasana ilay vibrator?
Vaovao amin'ny sehatra
Frigidité amin'ny vehivavy - inona ary izany ary ahoana no fandroahana anorgasmia?
Ahoana ny famerenana ny tombontsoan'ny olona iray?
Ny fiainan'i Eva Green
Fanafody antiviralan'ny taranaka vaovao
Karazana kiraro miaraka amin'ny tavy
52 mahavariana momba ny maso
Ny sary 15 voalohany amin'ireo olo-malaza izay mbola tsy nahita hatramin'izao
Ahoana no hianaranao hanoratra araka ny tokony ho izy?
Karazana loko roa misy loko
Ny rindrina mankany amin'ny efitrano
Litchi any an-trano
Famolavolana efitrano iray efitrano iray miaraka amin'ny garderie
Fanamboaran-jazakely avy amber - lamaody volamena sy volafotsy amber
Ahoana no tsy ahafahana matavy mandritra ny fitondrana vohoka?
Tablets avy amin'ny lalan-drà varikose